Otu esi ahota ngalaba aha maka ahia gi Martech Zone
Otu esi ahota ngalaba aha maka ahia gi
Fraịde, Ọktọba 25, 2013 Douglas Karr
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị iche echiche mgbe m na-azụta ngalaba aha mgbe niile (M na-ere otu ugboro!) Na otu m si kpebie ihe m ga-azụ. Anyị bidoro azụmahịa ọhụrụ CircuPress ọbụnadị akpọghị ụlọ ọrụ ahụ aha ruo mgbe anyị ji n'aka na anyị nwere ike ịzụta ngalaba aha maka ya! Echere m na oge ha na-agbanwe.
Mgbe á »na-ahá» rá »a ngalaba aha, na-egbu a itule n'etiti ndá» ‹a dá» ‹iche iche ihe dá» ‹mfe, memorabá»,, mkpa-bá »the isi ihe na-ejide ihe nnuku àmụmà nke ihe ịga nke ọma na karama gi.
Ekwenyere m na somethings ka na-agụ… dashes ka na-egosi a bit spammy na ogologo aha kwesịrị n'ezie ẹse. Ọzọkwa, kpachara anya ka ị ghara ịkọ ụta okwu ọjọọ n'ime ngalaba… dị ka Ntughari IT at yacrap.com, kwesịrị izere. WhoIsHostingThis.com chịkọta ndu a dị mma iji nyere gị aka ịhọrọ aha ngalaba ọzọ gị!
Tags: mbọnaha ahiahọrọ ngalaba ahangalaba ahangalaba ahachọta ngalaba ahawhoishostingthis.com
Kedu ihe Social Media pụtara maka Ahịa gị